Dutch vegetable sector support Myanmar | Several leading horticultural companies together with experts of Wageningen University and Research from the Netherlands support the commercial growth and development of the vegetable sector in Myanmar.
မြန်မာနိုင်ငံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဏ္ဍအတွက် ဒတ်ရ်ှနိုင်ငံ၏ပံ့ပိုးမှု
ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့် ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတူတကွလုပ်ဆောင်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဏ္ဍ အကျိုးရလဒ်များ စုစည်းမှု
ကျွနုပ်တို့သည် ဒေသခံတောင်သူများ၊ ကုန်သည်များနှင့် အခြားသော ကုန်စည်ကွင်းဆက်တလျှောက်ပါဝင်သူများပူးပေါင်း၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ဈေးကွက်တင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဆိုင်ရာတို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လက်တွေ့သရုပ်ပြ စမ်းသပ်ခြင်းများ၊ အဆိုပါ စမ်းသပ်ကွက်များသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုရေးလုပ်ငန်းများ အဓိက ပါဝင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဏ္ဍအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်း
စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းများတွင် ပံ့ပိုးခြင်းအစီအစဉ်မှ လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူ အနည်းဆုံး ၂၅၀၀၀၀ အထိ အောက်ပါနည်းပညာများ ဦးတည်ပံ့ပိုးမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူပေါင်း တစ်သန်းနီးပါးရှိပါသည်။ အချို့ကျေးလက်နေအိမ်ထောင်စုများသည် မိမိတို့တနိုင်စားသုံးရန် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာ အရေးပါသော ၀င်ငွေရလုပ်ငန်းအဖြစ် တောင်သူတော်တော်များများ သိမြင်လာပြီဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက် အရေအသွေးကောင်းသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ ၀ယ်လိုအားမှာ မြင့်မားလာလျှက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ပြည်ပတင်ပို့မှုအတွက်လည်း အခွင့်အလန်း ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၀ဂ္ဂနင်ဂန် Wageningen တက္ကသိုလ်နှင့် သုတေသနတို့မှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် နယ်သာလန်မှ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံဆိုင်ရာ ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီများက အတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နယ်သာလန်အစိုးရ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အားလုံး၏ ဘုံရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သော စိုက်ပျိုးသူများ၊ သွင်းအားစု ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ ကုန်သည်များ၊ တိုးချဲ့ပညာပေးသူများ၊ အများပြည်သူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များသည် ယုံကြည်ရသော မိတ်ဖက်ပါတနာများ ဖြစ်လာရေးပင်ဖြစ်သည်။ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အလားအလာရှိသောကဏ္ဍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ကြီးထွားရေး၊ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် မြင့်မားရေးနှင့် စိုက်ပျိုးသူ ကျား/မမရွေး ၀င်ငွေတိုးတက်ရေးတို့ကို ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းမှ အဓိက ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းများ – စီမံကိန်းတွင် တောင်သူများ၊ ကုန်သည်များနှင့် ကုန်စည်ကွင်းဆက်တလျှောက်ပါဝင်သည့် အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ စိုက်ပျိုးနည်းမျိုးစုံ စမ်းသပ်ကွက်များ၊ သရုပ်ပြကွက်များ၊ ကုန်စည်ကွင်းဆက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကုန်စည်ကွင်းဆက် ၄ မျိုးကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားရှိပြီး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ အဆင့်မြှင့်ခြင်း၊ တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းများနှင့် ကုန်စည်ကွင်းဆက် ပိုမိုထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထို့နောက် စိုက်ပျိုးသူများနှင့် အခြားပါတနာများ၏ ၀င်ငွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမရှိ တိုင်းတာပါသည်။ အဆိုပါ ကုန်စည်ကွင်းဆက်များ၏ ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း ၄ ခုမှာ-
(၁) မြန်မာပြည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်နှင့် အခြားသော အာဆီယံနိုင်ငံတို့အတွင်း ကြက်သွန်နီ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ၊ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု နှင့် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု တိုးတက်ရန်
(၂) ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွက် ခရမ်းချဉ်မျိုးသစ် ရာသီချိန်လွတ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် နှင့် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန
(၃) ဥရောပနိုင်ငံသို့ ပဲပင်ပေါက် တင်ပို့မှု ကဏ္ဍအတွက် အရည်အသွေးရှိ ပဲတီစိမ်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး ကွင်းဆက်တစ်ခု ထူထောင်နိုင်ရန်နှင့်
(၄) ပြည်ပမှမှာယူတင်သွင်းရသော မုန်လာဥနီအစား ပြည်တွင်းစိုက် မုန်လာဥနီ အစားထိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် တို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း – ၀ဂ္ဂနင်ဂန် Wageningen အပင်သုတေသနမှ ကျွမ်းကျင်သူများ ဦးဆောင်၍ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးသူတောင်သူများ၏ ဗဟုသုတကွန်ယက်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းအပြီး ၂၀၁၉ တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးသူတောင်သူ ၂၅၀၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀၀ အထိ ရောက်ရှိနိုင်ရန် မျှော်မှန်းပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ – ရေရှည်တည်တံ့သော၊ အကျိုးအမြတ် ရှိသော ဟင်းသီးဟင်ရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် စိုက်ပျိုးသူတောင်သူများ၏ စာတွေ့လက်တွေ့ဗဟုသုတများ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Advance Consulting သည် ဒတ်ရှ် စီးပွားရေးအကြံပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် လက်တင်အမေရိကရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများအား ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိသည်။ Advance Consulting သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။
Bejo သည် ဒတ်ရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမျိုးအစားများစွာ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော မျိုးစေ့ကုမ္မဏီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် မျိုးထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထုတ်ပိုး၊ ရောင်းချခြင်းများနှင့် အရည်အသွေးကောင်း ကြက်သွန်နီနှင့် ဥနီ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးစေ့နှင့် နည်းပညာ ပံ့ပိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
East-West မျိုးစေ့ကုမ္ပဏီသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ Enkhuizen အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ East-West ကုမ္ပဏီမှ အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက် စပ်မျိုးများနှင့် ပဲမျိုးစုံအတွက် OP မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီမှ ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းများအတွက် ကြက်သွန်တီ၊ ခရမ်းချဉ်နှင့် ပဲတီစိမ်းတို့အတွက်၊ မျိုးစေ့၊ နည်းပညာနှင့် တို့ချဲ့ပညာပေးဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
Evers Specials သည် ဥရောပတွင် အကြီးဆုံး ပဲပင်ပေါက် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်တွင် အခြေစိုက်ပြီး လတ်ဆတ်သော ပဲပင်ပေါက်များကို ဥရောပ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ စူပါမားကက်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် လက်ကားဈေးများသို့ တင်ပို့လျက်ရှိသည်။ Evers Specials သည် ဥရောပ ပဲပင်ပေါက်ထုတ်လုပ်သူအသင်း Euopean Sprouted Seeds Association (ESSA) အသင်းဝင်ဖြစ်ပြီး ပဲတီစိမ်းရှေ့ပြေးစီမံကိန်းတွင် ၀ယ်ယူရေးအဖွဲ့အဖြစ် ပါဝင်ပြီး အရည်အသွေးနှင့် Traceability ဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံဥာဏ်များ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
Impact Terra Pte. Ltd.
Impact Terra သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒတ်ရ်ှပိုင် လူမှုရေးလုပ်ငန်း Social Enterprise တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူများ၊ စိုက်ပျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းများနှင့် အခြား စိုက်ပျိုးရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ရွှေသီးနှံ mobile App နှင့် Facebook စာမျက်နှာများ တည်ထောင်ပြီး ၄င်းတို့မှ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိသည်။
Omnivent သည် အာလူး၊ ကြက်သွန်နီနှင့် ဥနီစသည်တို့ သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာများအတွက် ခေတ်မီ လေပေးစနစ်များနှင့် ရာသီဥတုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် နည်းပညာများ ထုတ်လုပ်တတ်ဆင်ပေးသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ Omnivent သည် ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းတွင် ကြက်သွန်နီနှင့် ဥနီသိုလှောင်မှုနှင့် ရိတ်သိမ်းပြီးလုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Orgaworld Aisa သည် အာရှတွင် တက်ကြွဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဒတ်ရ်ှကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ အဖိုးတန်သော ဈေးကွက်တင်ရောင်းချနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းအင်ရရှိမှုဆိုင်ရာများကို ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းတွင်Orgaworld Asia မြန်မာရုံးခွဲ ခရမ်းချဉ်နှင့် အခြား ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက် ဒေသထုတ် သဘာဝမြေသြဇာများ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
Wageningen Plant Research (WPR) သည် အပင်ဗေဒဆိုင်ရာအားလုံးတွင် ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းနှင့် တက္ကသိုလ်များ စသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အား ရည်ရှည်တည်တံ့သည့် စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများမှ ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကောင်းများကို WPR ကျွမ်းကျင်သူများက မျှဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ ဒတ်ရ်ှသံရုံးမှ စိုက်ပျိုးရေးရုံးသည် မြန်မာနှင့် ဒတ်ရ်ှပူးပေါင်းသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဏ္ဍ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများကို ကူညီမည်ဖြစ်သည်။
The Netherlands Enterprise Agency (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) သည် လုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့မှု၊ စုစည်းမှု၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ RVO မှ ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ၅၀ရာခိုင်နှုန် ငွေကြေးကျခံပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် RVO သည် ၀ဂ္ဂနင်ဂန်အပင်သုတေသန၏ စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများကို ငွေကြေးကျခံပေးမည်ဖြစ်သည်။